I-china intumescent fireproof itywina mveliso kunye nabenzi | Weicheng
Igama lemveliso I-sealant engangenisi umlilo
Ukucaciswa Model Iifayile ezingama-25 / ibhokisi
Izinto eziluncedo Product Umthamo uyanda ngaphezulu kwamaxesha ama-5 emlilweni, ubhetyebhetye kwaye unamathele, kwaye wenza ubume benethiwekhi eshinyeneyo emva kokutsha ngomlilo; inokuthintela ngokufanelekileyo ilangatye kunye nobushushu; ukusebenza eliphezulu nelangatye nekudodobalisa, ulwakhiwo lula
Ububanzi besicelo 1. Ukutywinwa komphezulu wezikhewu zomgangatho ophambukayo, udonga lokubamba eludongeni, imibhobho yoomatshini, imibhobho yokungenisa umoya, imibhobho yokugquma ubushushu, njl. ukudibanisa phakathi kwentloko kunye nodonga lomgangatho; 3. Imibhobho yeplastiki (≤50mm) umsantsa wokungena; umsantsa wokungena kwendlela ye-HVAC
Ukuxhathisa uMlilo 120min
Ngokubanzi, itywina lomlilo livavanywa ngendlela ethe nkqo. Ngokwesiphumo sovavanyo, inokwahlulahlulwa ibe yi-FV-0, Fv-1 kunye ne-Fv-2 ukusuka phezulu ukuya ezantsi. Isetyenziselwa ukutywinwa kwamakhethini eludongeni isakhiwo esingacimiyo, kwaye ifuna ukubanakho kokuchasana nokushenxiswa kokufuduka kunye nomlilo kunye nokuthintela umsi, i-Acrylic acid-proof sealant iyahambelana nodidi lwemipu. Uhlobo lokulinganisa uphawu lobungqina bomlilo luhlobo lwezinto zokutywina zeplastikhi zokufaka uphawu, ezinokusebenza ngokutywina kunye nobungqina bomlilo, kwaye kufanelekile kulwakhiwo lobungqina bomlilo. Umda wolwakhiwo uquka imibhobho yesinyithi, imibhobho efudumeza ubushushu kunye namalungu okwakha. Imicu yokuncamathela esetyenzisiweyo kwiingcango ezinobungqina bomlilo zesitywina sokuqina somlilo azinakho ukuhlangabezana neemfuno zobungqina bomlilo, jonga ngokubonakalayo ukuba akukho ndawo incinci imhlophe yezinto ezingatshiyo kwimicu yerabha. Ukuba usebenzisa i-lighter ukuyikhanyisa, yintoni enye, ukuba awufaki nje ii-strant seal, uthintelo lomlilo kunye nomsebenzi wokwahlula umsi kweengcango zomlilo zentsimbi zichaphazeleka kakhulu.
Isitywina esingenamlilo silulungele ulwakhiwo oludibeneyo phakathi kwesilingi nomzimba wodonga, ngakumbi kwilungu elide. Kuba ukwakhiwa kokutshiza kulula, kungonga amandla kunye nokunciphisa iindleko ngexesha lokwakha. Emva kokucocwa ngamanzi, inokunyangeka ngokupheleleyo kwaye ipeyintwe. Ububanzi obuphezulu bokudibanisa umlilo bunokuba zii-intshi ezi-6, kwaye ukusebenza komlilo kwindawo edibeneyo kunokufikelela kwiiyure ezimbini.
Egqithileyo Ingubo yomlilo
Okulandelayo: Izinto eziguquguqukayo zokuplaga kwezinto ezinobunzima obungenamlilo